ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ ၁၀၂ နှစ်ပြည့်ပြီ၊ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ဘယ်မှာလဲ [ဘ၀တခုလုံးကို ပုံအပ်ခဲ့တဲ့ ကျော်ကျော်မျိုးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း] - APANNPYAY
/ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ ၁၀၂ နှစ်ပြည့်ပြီ၊ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ဘယ်မှာလဲ [ဘ၀တခုလုံးကို ပုံအပ်ခဲ့တဲ့ ကျော်ကျော်မျိုးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း]
ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ ၁၀၂ နှစ်ပြည့်ပြီ၊ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ဘယ်မှာလဲ [ဘ၀တခုလုံးကို ပုံအပ်ခဲ့တဲ့ ကျော်ကျော်မျိုးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း]
မကြာသေးသောကာလက မြန်မာပြည်တပြည်လုံးလိုလို လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ လွတ်လပ်ရေး ခေါင်းဆောင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ရုပ်ရှင်ရိုက်မည်ဟုဆို၍ တပြည်လုံးဝမ်းသာအားရဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ငွေကြေးအကုန်အကျခံမည့်သူတွေပေါ်လာသည်။ ရုပ်ရှင် ကုမ္ပဏီကို အလကားပေးမည့်သူတွေ ပေါ်လာသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထိပ်တန်းဆိုသည့် ရုပ်ရှင်သမား၊ စာပေသမားများက ဇာတ်ညွှန်းတွေရေးကြ၊ သရုပ်ဆောင်တွေရွေးကြသည်။ လူတွေကလည်း ထိုသရုပ်ဆောင် မည့်သူတွေကို စိတ်ဝင်စားကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်မည့်သူက အခရာအကျဆုံး။
ဤဇာတ်ကားတွင် အဓိကအကျဆုံး၊ အခရာအကျဆုံး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်မည့်သူတွေ ထဲမှာ ”ကျော်ကျော်မျိုး”ဆိုသူကို ရွေးချယ်လိုက်သည့်အခါ အတော်ပင် ၀မ်းသာသွားကြသည်။ ကျော်ကျော်မျိုး ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပေါ် အထူးလေးစားကြည်ညိုစိတ်ရှိသည်။ ပြီးတော့ သူ့ရုပ်ကလည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အလွန်နီးနီးကပ်ကပ်တူသည်။ ဒီတော့ သရုပ်ဆောင်ပညာကို သူကြိုးစားမည်။ လက်ရှိ ကမ္ဘောဇဘောလုံးအသင်းမှာ လက်ရွေးစင်။ ဘောလုံးသမားအဖြစ် ထိုက်တန်သည့် လစာလည်း ရထားသည်။
သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်အတွက် သရုပ်ဆောင်အရွေးချယ်ခံရသည်ဆိုကတည်းက သူ့ဝါသနာ၊ သူ့အားကစား ပညာများကို စွန့်လွှတ်လိုက်သည်။ ဆိုရလျှင်တော့ သူ့မှာ အတည်တကျဖြစ်နေသောဘ၀ တခုလုံးကို ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်အတွက် မြှုပ်နှံလိုက်သည်။
လူဆိုတာ မျှော်လင့်ချက်နှင့်အသက်ရှင်ရခြင်းပါ။ ယခု ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ဘယ်ဆီရောက်နေပြီလဲ။ မေ့ပျောက်ခံနေရလေပြီ။ သို့သော် ကျော်ကျော်မျိုးကတော့ ယနေ့ထိတိုင်မျှော်လင့်နေဆဲ။
ကမ္ဘာမှာ အတ္ထုပ္ပတ္တိရုပ်ရှင်ကားတွေ ဟောလီဝုဒ်ကရိုက်ခဲ့တာတွေ အတော်လေးရှိပါသည်။ အိုင်ယာလန် သူပုန်ခေါင်းဆောင် မိုက်ကယ်ကောလင်း၊ တရုတ်နောက်ဆုံးဧကရာဇ်ပုယီ၏ ‘The Last Emperor’ အိန္ဒိယ လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်၊ အကြမ်းမဖက်တိုက်ပွဲဝင်သူ’ဂန္ဒီ’စသည့် ကမ္ဘာကျော်ဇာတ်လမ်းများမှာ အထင်ကရရှိသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်းကိုလည်း အကယ်၍ ဟောလီဝုဒ်က ကမ္ဘာကျော် ဒါရိုက်တာ၊ ဇာတ်ညွှန်းဆရာ၊ သမိုင်းအချက် အလက်ရှာဖွေသူများနှင့်သာ ရိုက်မည်ဆိုလျှင် ကမ္ဘာကျော် ဇာတ်ကားတကား ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ ကိုယ့်နိုင်ငံကလူတွေကို အထင်သေး၍ပြောခြင်းမဟုတ်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ မှာကျတော့ ချို့ယွင်းချက်၊ အားနည်းချက်တွေရှိသည်။ ပစ္စည်းကိရိယာမစုံမလင်တာတွေရှိမည်။ ပြီးတော့ ငွေကြေးအလုံးအရင်းသုံးရမည့်နေရာတွေရှိသည်။ ပြီးတော့ ရိုက်ကွင်းရိုက်ကွက်တွေ၊ ဒီတော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် မှာ မဖြစ်နိုင်လျှင် ပြည်ပကထိပ်တန်းရုပ်ရှင်သမားတွေကို အပ်လိုက်လျှင်တော့ . . .
ဟိုတလောကပဲ ကမ္ဘာကျော်မင်းသား ဂရေဂရီပက်နှင့် မြန်မာမင်းသမီး ၀င်းမင်းသန်းတို့ သရုပ်ဆောင်သော ‘Purple Plain’ ရုပ်ရှင်ကားကို ပြန်ကြည့်ရသည်။ ဒါကလည်း မြန်မာပြည်မှာ ရိုက်သည်မဟုတ်။ သီရိလင်္ကာမှာ ရိုက်သည်ဟု သိရသည်။ သို့သော် ရုပ်ရှင်အဖြစ် အဆင့်အတန်းမြင့်သည်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လည်း လုံးလုံးမဆန့်ကျင်သည့် သဘောသဘာဝများကို ရိုက်ကူးထား၍ အလွန်ကြည့်၍ အရသာရှိပါသည်။
ဒီတော့ ကံအကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်လာလျှင်တော့ ကျော်ကျော်မျိုးသည်လည်း ပြည်ပနိုင်ငံရုပ်ရှင်သမားများ နှင့် ထိပ်တန်းကားတကားဖြစ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဇာတ်ကားမရိုက်ရဘူးဟု မပြောနိုင်။ လူဆိုသည်မှာ မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် အသက်ရှင်နေရခြင်းဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်ချက်ရှိဆဲ ကျော်ကျော်မျိုးနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်အကြောင်း၊ သရုပ်ဆောင် အရွေးခံရသည့်အကြောင်းများကို ပြန်ပြောင်းမေးမြန်းလိုက် သည့်အခါ-
မေး- ကိုကျော်ကျော်မျိုးရေ လက်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်လည်း အစအနပျောက်နေတော့ ဘာလုပ်နေလဲဗျ။
ဖြေ- ဘာမှမလုပ်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော့်နေရပ်ဖြစ်တဲ့ မန္တလေးမြစ်ငယ်ကိုပြန်ရောက်နေပါပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ဖြစ် မြောက်ရေးနဲ့တော့ တခါတလေ အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်က ၁၀၂ နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ ဗိုလ်ချုပ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးကတော့ ဘာမှမထူးသေးပါဘူး။ ထူးရင်ပြောပါမယ်ဗျ။
မေး- ကိုကျော်ကျော်မျိုးက ကမ္ဘောဇအသင်းက လက်ရွေးစင်ဖြစ်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေရာက ရွေးချယ်ခံရတော့ ဘောလုံးကစားခြင်းကိုလည်း စွန့်လွှတ်ထားရတယ်။ အခုရော ဘောလုံးကစားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့ကျင့်မှု တွေ ရှိသေးလား။
ဖြေ- လက်ရှိ ဘောလုံးကစားရမယ်ဆိုရင် Traning တော့ အမြဲမပြတ်ဘူး။ ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ ဘောလုံးပွဲတွေရှိတယ်။ ကိုယ့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ ကလေးတွေကိုလည်း သင်ပေးတယ်။ လေ့ကျင့်မှုကတော့ မပြတ်ပါဘူး။
မေး- ရန်ကုန်ကိုရော မလာဖြစ်ဘူးလားဗျ။
ဖြေ- ရန်ကုန်ကို မလာဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပြီဗျ။ ကိုယ့်ဒေသမှာ ကိုယ့်နိုင်တဲ့ ပရဟိတလေးတွေလည်း လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးထူးထွေထွေ မရှိပါဘူး။
မေး- ကိုကျော်ကျော်မျိုးအနေနဲ့ တကယ်လို့ ဘောလုံးကန်မယ်ဆိုရင်ရော အခုချိန်ကန်နိုင်သေးလားဗျ။
ဖြေ- ဘောလုံးကန်မယ်ဆိုကန်လို့ရတာပေါ့။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေတောင် ကန်နေကြတာပဲလေ။ ကျွန်တော်နဲ့ သက်တူရွယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေ အခုကန်နေတာပဲလေ။ ကန်လို့ရရင် ကန်ချင်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ဟိုအပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်လေ။ ဟိုအပေါ်မှာဆိုတာက ကျွန်တော့်ကို အသင်းကဇာတ် ကားအတွက် ပေးထားတာလေ။ ကျွန်တော့်ဘက်က စပြီး ကန်ချင်ပါတယ်လို့ ပြောလို့မှမရတာ။
မေး- ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ကလည်း ခုထိ ဘာမှမသိရသေးဘူး။ ဘောလုံးကန်တာကိုလည်း စွန့်လွှတ်ထား ရတယ်ဆိုတော့ ကိုကျော်ကျော်မျိုးအတွက် ဘယ်လိုအခက်အခဲရှိလဲဗျ။
ဖြေ- ကလပ်အသင်းကတော့ ထောက်ပံ့တယ်။ ဇာတ်ကားကလည်း အဖြူအမည်း မသဲကွဲသေးဘူး။ ဘောလုံး ကန်တာကိုလည်း စွန့်လွှတ်ထားရတယ်ဆိုတော့ အများကြီးတော့ နစ်နာတာပေါ့။ ကျွန်တော်က တခုခုကို ပီပီပြင်ပြင်လုပ်ချင်တာပေါ့။ အားလုံးကတော့ လူကြီးတွေအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ လူကြီးတွေက အသင်းနဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ထားတာ သူတို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်း လက်ခံရမှာလေ။ ကိုယ်က လုပ်လို့မရဘူးလေ။
မေး- လူကြီးတွေက အသင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းထားတာဆိုတော့ လက်ရှိရုပ်ရှင်လည်း မရိုက်ဖြစ်သေးချိန်မှာ ကိုကျော်ကျော်မျိုးကို ဘောလုံးကန်ခွင့်ရအောင် ညှိနှိုင်းပေးမယ်ဆိုရင်ရော ရနိုင်လားဗျ။
ဖြေ- ဘောလုံးပြန်ကစားနိုင်ဖို့ လူကြီးတွေက ညှိနှိုင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်ကောင်းတာပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေရော၊ ဆရာတွေကပါ အဲလိုတော့ပြောကြပါတယ်။
မေး- ရိုက်ကူးရေးလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းက ဘယ်လောက်ကြာကြာရိုက်ကူးခဲ့သေးလဲဗျ။
ဖြေ- ရိုက်ကူးရေးတုန်းက အစမ်းပြမယ့်ဟာလောက်ပဲ ရိုက်ခဲ့ရတာလေ။ ရိုက်တုန်းကတော့ ဘယ်လိုသုံးမလဲ ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူး။ တချို့ဟာတွေ ရိုက်တာရှိသလို ပြန်ရိုက်ရမယ့်ဟာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တခါတလေ ငါးရက်လောက်ရိုက်လိုက် နားလိုက် အဲဒီလိုပဲ သွားတာလေ။
မေး- ဗိုလ်ချုပ်ပုံစံတူရွေးတုန်းက ဘယ်နှခုနှစ်လောက်က ဖြစ်မလဲ။ ရွေးချယ်ရေးမှာ ဘယ်သူတွေပါလဲ။
ဖြေ- စ,စချင်းရွေးတာက ၂၀၁၁ နဲ့ ၂၀၁၂ ကြားလောက်မှာဗျ။ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ထဲမှာ ဦးဇာဂနာ၊ ဦးဇော် သက်ထွေး၊ ဦးလူမင်း၊ မကြည်ဖြူရှင်၊ မထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်၊ ဒေါ်အေးခိုင် အများကြီးဗျ။ နောက်ဆုံးအဆင့်မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ရွေးတာပါ။
မေး- ကိုကျော်ကျော်မျိုးနဲ့ သရုပ်ဆောင်မယ့် သူတွေနဲ့ရော ဆက်သွယ်ဖြစ်သေးလား။ သူတို့တွေရော ဘာလုပ်နေကြလဲ။
ဖြေ- ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ ဖုန်းမဆက်ဖြစ်တာတောင် အတော်ကြာပြီဗျ။ အရင်တုန်းကတော့ ရှိပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း အဆက်အသွယ်မလုပ်ဖြစ်ဘူး။
မေး- လက်ရှိမှာ နှစ်ခုလုံးစွန့်လွှတ်ထားရတဲ့ အနေအထားဆိုတော့ အနာဂတ်အတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထား သလဲ။
ဖြေ- အနာဂတ်အတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က ဘာမှလုပ်လို့ကိုင်လို့မရဘူးလေ။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဒီအတိုင်းပဲလေ။ အသင်းကလည်း ထောက်ပံ့ထားတယ်။ ဇာတ်ကားကလည်း မရိုက် ဖြစ်သေးဘူး။
မေး- ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်က လက်ရှိအချိန်အထိ ဘာကြောင့်မရိုက်နိုင်သေးတာလဲလို့ ထင်လဲ။
ဖြေ- ရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာ မူတည်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ပဲ ဆိုင်မှာဗျ။ အခက်အခဲက လူကြီးပိုင်းကပဲ သိမှာ။
မေး- ဒီတော့ ဘုတ်အဖွဲ့ကို မီဒီယာကနေ တခုခုပြောမယ်ဆိုရင် ဘာပြောချင်လဲဗျ။
ဖြေ- မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့်စိတ်မှာ ကျွန်တော် အရင်ကတည်းက ကိုယ့်အပူကို သူများအပူမဖြစ်စေချင်ဘူး။ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတခုအပေါ် နောင်တမရပါဘူး။ ကျွန်တော်က စိတ်ရှည်ပါတယ်။ စိတ်လည်း ရှင်းပါတယ်။
Credit: News Watch
မကွာသေးသောကာလက မွနျမာပွညျတပွညျလုံးလိုလို လှုပျလှုပျခတျခတျဖွဈခဲ့ကွသညျ။ လှတျလပျရေး ခေါငျးဆောငျ အမြိုးသားခေါငျးဆောငျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး အတ်ထုပ်ပတ်တိကို ရုပျရှငျရိုကျမညျဟုဆို၍ တပွညျလုံးဝမျးသာအားရဖွဈခဲ့ကွသညျ။ ငှကွေေးအကုနျအကခြံမညျ့သူတှပေျေါလာသညျ။ ရုပျရှငျ ကုမ်ပဏီကို အလကားပေးမညျ့သူတှေ ပျေါလာသညျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ ထိပျတနျးဆိုသညျ့ ရုပျရှငျသမား၊ စာပသေမားမြားက ဇာတျညှနျးတှရေေးကွ၊ သရုပျဆောငျတှရှေေးကွသညျ။ လူတှကေလညျး ထိုသရုပျဆောငျ မညျ့သူတှကေို စိတျဝငျစားကွသညျ။ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးအဖွဈ သရုပျဆောငျမညျ့သူက အခရာအကဆြုံး။
ဤဇာတျကားတှငျ အဓိကအကဆြုံး၊ အခရာအကဆြုံး ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးအဖွဈ သရုပျဆောငျမညျ့သူတှေ ထဲမှာ ”ကြျောကြျောမြိုး”ဆိုသူကို ရှေးခယျြလိုကျသညျ့အခါ အတျောပငျ ဝမျးသာသှားကွသညျ။ ကြျောကြျောမြိုး ကိုယျတိုငျကလညျး ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးအပျေါ အထူးလေးစားကွညျညိုစိတျရှိသညျ။ ပွီးတော့ သူ့ရုပျကလညျး ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးနှငျ့ အလှနျနီးနီးကပျကပျတူသညျ။ ဒီတော့ သရုပျဆောငျပညာကို သူကွိုးစားမညျ။ လကျရှိ ကမ်ဘောဇဘောလုံးအသငျးမှာ လကျရှေးစငျ။ ဘောလုံးသမားအဖွဈ ထိုကျတနျသညျ့ လစာလညျး ရထားသညျ။
သို့သျော ဗိုလျခြုပျရုပျရှငျအတှကျ သရုပျဆောငျအရှေးခယျြခံရသညျဆိုကတညျးက သူ့ဝါသနာ၊ သူ့အားကစား ပညာမြားကို စှနျ့လှတျလိုကျသညျ။ ဆိုရလြှငျတော့ သူ့မှာ အတညျတကဖြွဈနသေောဘဝ တခုလုံးကို ဗိုလျခြုပျရုပျရှငျအတှကျ မွှုပျနှံလိုကျသညျ။
လူဆိုတာ မြှျောလငျ့ခကျြနှငျ့အသကျရှငျရခွငျးပါ။ ယခု ဗိုလျခြုပျရုပျရှငျ ဘယျဆီရောကျနပွေီလဲ။ မပြေ့ောကျခံနရေလပွေီ။ သို့သျော ကြျောကြျောမြိုးကတော့ ယနထေိ့တိုငျမြှျောလငျ့နဆေဲ။
ကမ်ဘာမှာ အတ်ထုပ်ပတ်တိရုပျရှငျကားတှေ ဟောလီဝုဒျကရိုကျခဲ့တာတှေ အတျောလေးရှိပါသညျ။ အိုငျယာလနျ သူပုနျခေါငျးဆောငျ မိုကျကယျကောလငျး၊ တရုတျနောကျဆုံးဧကရာဇျပုယီ၏ ‘The Last Emperor’ အိန်ဒိယ လှတျလပျရေးခေါငျးဆောငျ၊ အကွမျးမဖကျတိုကျပှဲဝငျသူ’ဂန်ဒီ’စသညျ့ ကမ်ဘာကြျောဇာတျလမျးမြားမှာ အထငျကရရှိသညျ။ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးအကွောငျးကိုလညျး အကယျ၍ ဟောလီဝုဒျက ကမ်ဘာကြျော ဒါရိုကျတာ၊ ဇာတျညှနျးဆရာ၊ သမိုငျးအခကျြ အလကျရှာဖှသေူမြားနှငျ့သာ ရိုကျမညျဆိုလြှငျ ကမ်ဘာကြျော ဇာတျကားတကား ဖွဈလာပါလိမျ့မညျ။ ကိုယျ့နိုငျငံကလူတှကေို အထငျသေး၍ပွောခွငျးမဟုတျ၊ ကိုယျ့နိုငျငံ မှာကတြော့ ခြို့ယှငျးခကျြ၊ အားနညျးခကျြတှရှေိသညျ။ ပစ်စညျးကိရိယာမစုံမလငျတာတှရှေိမညျ။ ပွီးတော့ ငှကွေေးအလုံးအရငျးသုံးရမညျ့နရောတှရှေိသညျ။ ပွီးတော့ ရိုကျကှငျးရိုကျကှကျတှေ၊ ဒီတော့ ကိုယျ့တိုငျးပွညျ မှာ မဖွဈနိုငျလြှငျ ပွညျပကထိပျတနျးရုပျရှငျသမားတှကေို အပျလိုကျလြှငျတော့ . . .
ဟိုတလောကပဲ ကမ်ဘာကြျောမငျးသား ဂရဂေရီပကျနှငျ့ မွနျမာမငျးသမီး ဝငျးမငျးသနျးတို့ သရုပျဆောငျသော ‘Purple Plain’ ရုပျရှငျကားကို ပွနျကွညျ့ရသညျ။ ဒါကလညျး မွနျမာပွညျမှာ ရိုကျသညျမဟုတျ။ သီရိလင်ျကာမှာ ရိုကျသညျဟု သိရသညျ။ သို့သျော ရုပျရှငျအဖွဈ အဆငျ့အတနျးမွငျ့သညျ။ မွနျမာ့ယဉျကြေးမှုနှငျ့လညျး လုံးလုံးမဆနျ့ကငျြသညျ့ သဘောသဘာဝမြားကို ရိုကျကူးထား၍ အလှနျကွညျ့၍ အရသာရှိပါသညျ။
ဒီတော့ ကံအကွောငျးတရားတိုကျဆိုငျလာလြှငျတော့ ကြျောကြျောမြိုးသညျလညျး ပွညျပနိုငျငံရုပျရှငျသမားမြား နှငျ့ ထိပျတနျးကားတကားဖွဈသညျ့ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးဇာတျကားမရိုကျရဘူးဟု မပွောနိုငျ။ လူဆိုသညျမှာ မြှျောလငျ့ခကျြဖွငျ့ အသကျရှငျနရေခွငျးဖွဈသညျ။ မြှျောလငျ့ခကျြရှိဆဲ ကြျောကြျောမြိုးနှငျ့ ဗိုလျခြုပျရုပျရှငျအကွောငျး၊ သရုပျဆောငျ အရှေးခံရသညျ့အကွောငျးမြားကို ပွနျပွောငျးမေးမွနျးလိုကျ သညျ့အခါ-
မေး- ကိုကြျောကြျောမြိုးရေ လကျရှိ ဗိုလျခြုပျရုပျရှငျလညျး အစအနပြောကျနတေော့ ဘာလုပျနလေဲဗြ။
ဖွေ- ဘာမှမလုပျဘူးဗြ။ ကြှနျတေျာ့နရေပျဖွဈတဲ့ မန်တလေးမွဈငယျကိုပွနျရောကျနပေါပွီ။ ဗိုလျခြုပျရုပျရှငျဖွဈ မွောကျရေးနဲ့တော့ တခါတလေ အဆကျအသှယျရှိပါတယျ။ ဗိုလျခြုပျက ၁၀၂ နှဈပွညျ့တော့မယျ။ ဗိုလျခြုပျ ရုပျရှငျရိုကျကူးရေးကတော့ ဘာမှမထူးသေးပါဘူး။ ထူးရငျပွောပါမယျဗြ။
မေး- ကိုကြျောကြျောမြိုးက ကမ်ဘောဇအသငျးက လကျရှေးစငျဖွဈတယျ။ ဗိုလျခြုပျနရောက ရှေးခယျြခံရတော့ ဘောလုံးကစားခွငျးကိုလညျး စှနျ့လှတျထားရတယျ။ အခုရော ဘောလုံးကစားခွငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး လကေ့ငျြ့မှု တှေ ရှိသေးလား။
ဖွေ- လကျရှိ ဘောလုံးကစားရမယျဆိုရငျ Traning တော့ အမွဲမပွတျဘူး။ ကိုယျတိုငျလုပျတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဘကျမှာ ဘောလုံးပှဲတှရှေိတယျ။ ကိုယျ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ ကလေးတှကေိုလညျး သငျပေးတယျ။ လကေ့ငျြ့မှုကတော့ မပွတျပါဘူး။
မေး- ရနျကုနျကိုရော မလာဖွဈဘူးလားဗြ။
ဖွေ- ရနျကုနျကို မလာဖွဈတာ တျောတျောကွာပွီဗြ။ ကိုယျ့ဒသေမှာ ကိုယျ့နိုငျတဲ့ ပရဟိတလေးတှလေညျး လုပျဖွဈပါတယျ။ ထူးထူးထှထှေေ မရှိပါဘူး။
မေး- ကိုကြျောကြျောမြိုးအနနေဲ့ တကယျလို့ ဘောလုံးကနျမယျဆိုရငျရော အခုခြိနျကနျနိုငျသေးလားဗြ။
ဖွေ- ဘောလုံးကနျမယျဆိုကနျလို့ရတာပေါ့။ ကြှနျတေျာ့သူငယျခငျြးတှတေောငျ ကနျနကွေတာပဲလေ။ ကြှနျတျောနဲ့ သကျတူရှယျတူ သူငယျခငျြးတှေ အခုကနျနတောပဲလေ။ ကနျလို့ရရငျ ကနျခငျြတာပေါ့ဗြာ။ ဒါပမေဲ့ ဟိုအပျေါမှာပဲ မူတညျတယျလေ။ ဟိုအပျေါမှာဆိုတာက ကြှနျတေျာ့ကို အသငျးကဇာတျ ကားအတှကျ ပေးထားတာလေ။ ကြှနျတေျာ့ဘကျက စပွီး ကနျခငျြပါတယျလို့ ပွောလို့မှမရတာ။
မေး- ဗိုလျခြုပျရုပျရှငျကလညျး ခုထိ ဘာမှမသိရသေးဘူး။ ဘောလုံးကနျတာကိုလညျး စှနျ့လှတျထား ရတယျဆိုတော့ ကိုကြျောကြျောမြိုးအတှကျ ဘယျလိုအခကျအခဲရှိလဲဗြ။
ဖွေ- ကလပျအသငျးကတော့ ထောကျပံ့တယျ။ ဇာတျကားကလညျး အဖွူအမညျး မသဲကှဲသေးဘူး။ ဘောလုံး ကနျတာကိုလညျး စှနျ့လှတျထားရတယျဆိုတော့ အမြားကွီးတော့ နဈနာတာပေါ့။ ကြှနျတျောက တခုခုကို ပီပီပွငျပွငျလုပျခငျြတာပေါ့။ အားလုံးကတော့ လူကွီးတှအေပျေါမှာ မူတညျတယျ။ လူကွီးတှကေ အသငျးနဲ့ တိုကျရိုကျခြိတျထားတာ သူတို့ဆုံးဖွတျတဲ့အတိုငျး လကျခံရမှာလေ။ ကိုယျက လုပျလို့မရဘူးလေ။
မေး- လူကွီးတှကေ အသငျးနဲ့တိုကျရိုကျညှိနှိုငျးထားတာဆိုတော့ လကျရှိရုပျရှငျလညျး မရိုကျဖွဈသေးခြိနျမှာ ကိုကြျောကြျောမြိုးကို ဘောလုံးကနျခှငျ့ရအောငျ ညှိနှိုငျးပေးမယျဆိုရငျရော ရနိုငျလားဗြ။
ဖွေ- ဘောလုံးပွနျကစားနိုငျဖို့ လူကွီးတှကေ ညှိနှိုငျးပေးမယျဆိုရငျတော့ တျောတျောကောငျးတာပေါ့။ သူငယျခငျြးတှရေော၊ ဆရာတှကေပါ အဲလိုတော့ပွောကွပါတယျ။
မေး- ရိုကျကူးရေးလုပျခဲ့တဲ့အခြိနျတုနျးက ဘယျလောကျကွာကွာရိုကျကူးခဲ့သေးလဲဗြ။
ဖွေ- ရိုကျကူးရေးတုနျးက အစမျးပွမယျ့ဟာလောကျပဲ ရိုကျခဲ့ရတာလေ။ ရိုကျတုနျးကတော့ ဘယျလိုသုံးမလဲ ကြှနျတျောလညျး မသိပါဘူး။ တခြို့ဟာတှေ ရိုကျတာရှိသလို ပွနျရိုကျရမယျ့ဟာတှလေညျး ရှိပါတယျ။ တခါတလေ ငါးရကျလောကျရိုကျလိုကျ နားလိုကျ အဲဒီလိုပဲ သှားတာလေ။
မေး- ဗိုလျခြုပျပုံစံတူရှေးတုနျးက ဘယျနှခုနှဈလောကျက ဖွဈမလဲ။ ရှေးခယျြရေးမှာ ဘယျသူတှပေါလဲ။
ဖွေ- စ,စခငျြးရှေးတာက ၂၀၁၁ နဲ့ ၂၀၁၂ ကွားလောကျမှာဗြ။ ရှေးခယျြရေးအဖှဲ့ထဲမှာ ဦးဇာဂနာ၊ ဦးဇျော သကျထှေး၊ ဦးလူမငျး၊ မကွညျဖွူရှငျ၊ မထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျ၊ ဒျေါအေးခိုငျ အမြားကွီးဗြ။ နောကျဆုံးအဆငျ့မှ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုယျတိုငျ ရှေးတာပါ။
မေး- ကိုကြျောကြျောမြိုးနဲ့ သရုပျဆောငျမယျ့ သူတှနေဲ့ရော ဆကျသှယျဖွဈသေးလား။ သူတို့တှရေော ဘာလုပျနကွေလဲ။
ဖွေ- ဘာလုပျနလေဲဆိုတော့ ဖုနျးမဆကျဖွဈတာတောငျ အတျောကွာပွီဗြ။ အရငျတုနျးကတော့ ရှိပါတယျ။ ခုနောကျပိုငျး အဆကျအသှယျမလုပျဖွဈဘူး။
မေး- လကျရှိမှာ နှဈခုလုံးစှနျ့လှတျထားရတဲ့ အနအေထားဆိုတော့ အနာဂတျအတှကျ ဘယျလိုပွငျဆငျထား သလဲ။
ဖွေ- အနာဂတျအတှကျ ဘာတှပွေငျဆငျထားလဲဆိုတော့ ကြှနျတျောက ဘာမှလုပျလို့ကိုငျလို့မရဘူးလေ။ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ ဒီအတိုငျးပဲလေ။ အသငျးကလညျး ထောကျပံ့ထားတယျ။ ဇာတျကားကလညျး မရိုကျ ဖွဈသေးဘူး။
မေး- ဗိုလျခြုပျရုပျရှငျက လကျရှိအခြိနျအထိ ဘာကွောငျ့မရိုကျနိုငျသေးတာလဲလို့ ထငျလဲ။
ဖွေ- ရုပျရှငျဖွဈမွောကျရေးအဖှဲ့အစညျးပျေါမှာ မူတညျမယျလို့ ထငျပါတယျ။ ဗိုလျခြုပျရုပျရှငျဖွဈမွောကျရေး ဘုတျအဖှဲ့နဲ့ပဲ ဆိုငျမှာဗြ။ အခကျအခဲက လူကွီးပိုငျးကပဲ သိမှာ။
မေး- ဒီတော့ ဘုတျအဖှဲ့ကို မီဒီယာကနေ တခုခုပွောမယျဆိုရငျ ဘာပွောခငျြလဲဗြ။
ဖွေ- မရှိပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့စိတျမှာ ကြှနျတျော အရငျကတညျးက ကိုယျ့အပူကို သူမြားအပူမဖွဈစခေငျြဘူး။ ကိုယျလုပျခဲ့တဲ့ကိစ်စတခုအပျေါ နောငျတမရပါဘူး။ ကြှနျတျောက စိတျရှညျပါတယျ။ စိတျလညျး ရှငျးပါတယျ။